တရားရုံး၏ ဝန်ဆောင်မှုများ | ကရင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်
အမှတ် (၇) သဘာဝစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး၊ လက္ခဏစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အသက်မွေးမှု အတတ်သင်စခန်း အား ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း
တရားစီရင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် နှင့် အဂတိတရားကင်းရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရာဇဝတ်နှင့် တရားမဆိုင်ရာသင်တန်းကို သင်ကြားပို့ချခြင်း
တရားရုံးဝန်ထမ်းများ ရုံးလုပ်ငန်း အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၀) ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပခြင်း
ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၏ တရားမဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်၏ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်အမှုခေါ်စာရင်း
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ လက်ခံရရှိသည့် သင့်အတွက်တရားရုံးစောင်ရေ (၇၀၀၀)၊ ရာဇ၀တ်မှုအကြောင်းသိကောင်းစရာစောင်ရေ (၇၀၀၀)၊ တရားမမှုအကြောင်း သိကောင်းစရာ စောင်ရေ(၇၀၀၀)၊ စာချွန်တော် အကြောင်းသိကောင်းစရာ စောင်ရေ (၇၀၀၀) စီကို ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်တရားရုံးများက ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ပြည်သူများသို့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက် တရားစီရင်ရေးအသိအမြင် ဗဟုသုတတိုးမြှင့်စေရန်အတွက် တရားစီရင်ရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၈-၂၀၂၂)၏ ပထမနှစ်အတွက် မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် (၂-၂-၃)တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် တရားရုံးသတင်း အချက်အလက်များကို တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆောင်ရွက်ရန် ဖော်ပြပါ ရှိ၍ အထက်ဖော်ပြပါ လက်ကမ်းစာစောင်များ (တရားမ၊ ရာဇ၀တ်၊ စာချွန်တော်၊ သင့်အတွက် တရားရုံး)ကို စကောကရင်၊ ပိုးကရင်၊ မွန်နှင့် ပအိုဝ်းဘာသာများသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီး ဖြန့်ဝေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဘားအံခရိုင်တရားရုံး၊ ဘားအံမြို့နယ်တရားရုံး၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တရားရုံးတို့အား ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် နှင့် USAID-PRLMတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီသော နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (NCMP)ဖြင့် တရားစီရင်ရေးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဘားအံအကျဉ်းထောင်အား ကရင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခြင်း
Copyright © 2019 High Court of Kayin State. All Rights Reserved.
Last Updated:2July' 2020